कालिका नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा आधारभूत तहको स्वास्थ्य चौकी बनाउँदै | PBM News.com
कालिका नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा आधारभूत तहको स्वास्थ्य चौकी बनाउँदै
पिविएम न्यूज –
कालिका १ असार । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकाका स्थानीयले अब प्रत्येक वडाबाटै आधारभूत तहका स्वास्थ्य सेवा पाउने भएका छन् । प्रत्येक वडामा आधारभूत तहको स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने नगरपालिकाले तयारी गरेपछि वडाबाटै स्थानीयले आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा पाउने भएका हुन ।
नगरपालिकाले केन्द्रीय सरकारवाट प्राप्त आर्थिक सहयोगवाट प्रत्येक वडामा आधारभूत तहको स्वास्थ्य चौकी बनाउने कामलाई तीब्रता दिएको छ । कालिका नगरपालिको वडा नं. १ ले आज ( सोमवार ) मात्रै स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणको काम सुरु गरेको छ । वडा कार्यालसँगै निर्माण गर्न लागिएको स्वास्थ्य चौकीको आजै शिलन्यास गरिएको वडा अध्यक्ष लिला वहादुर गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले ३८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्षको असार मसान्त भित्र ३५ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने योजना छ । तर जारी लक डाउनका कारण निर्धारित समयभित्र काम सुरु गर्न सकेनन् ।
अहिले कालिका नगरपालिकामा जुटपानी अस्पताल सँगै ३ वटा स्वास्थ्य चौकी संचालनमा छन् । अब ८ वटा वडामा आधारभूत तहको स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुँदैछ । प्रत्येक वडाका नागरिकको पहुँच आधारभूत तहको स्वास्थ्य क्षेत्र सम्म पुर्याउन यो योजना ल्याइएको कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण ( गोपी ) श्रेष्ठले बताए । वर्गीकरणको आधारमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न लागिएको हो । जनसंख्याको आधारमा ‘क’ र ‘ख’ गरी दुई तहको भवन निर्माण हुनेछ । धेरै जनसंख्या भएको वडामा ‘क’ वर्गको भवन निर्माण हुँदैछ । कालिकामा वडा नं. ८ लाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ भने अन्य वडालाई ‘ख’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
केन्द्र सरकारले नै गरेको सर्वेको आधारमा वर्गीकरण गरिएको कालिका नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठका स्वकीय सचिव दीपक लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्गीकरणकै आधारमा बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ । वडा नं. ८ लाई भवन निर्माणका लागि ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने अन्य वडालाई ३८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आधारभूत तहको स्वास्थ्य चौकीमा अहेब, स्टाफनर्स, अनमीको व्यवस्थापन हुने छ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा दुई दुईजना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ । कालिका नगरपालिकामा हाल ११ वटा वडाहरु छन् ।
जोखिम बढ्दै गएपछि आजराती १२ बजेदेखि पूर्वी चितवनमा निषेधाज्ञा जारीगर्ने निर्णय
उत्तर कोरियामा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएपछि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा
प्रहरी प्रधान कार्यालयका चार जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
सडक सञ्जालमा अब्बल बन्दै भरतपुर महानगर, देखिनेगरी काम गरिरहेका छौँः प्रमुख रेनु दाहाल
एकैदिनमा थपिए ५३ जना संक्रमित / यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ३ सय ५७ पुग्यो